Tombony sy fatiantoka an'ny Apple Watch miaraka amin'ny LTE | Avy amin'ny mac aho
Tombony sy fatiantoka an'ny Apple Watch miaraka amin'ny LTE
Javier Porcar | | Apple Watch, tsaho, maro
Amin'ity fahavaratra ity dia mahazo tsaho momba ny vaovao isika Apple Watch miaraka amin'ny LTE, izany hoe, afaka mampiasa ny famantaranandro Apple isika na dia tsy eo akaiky eo aza ny telefaonintsika na maty. Ny fanontaniana apetratsika amin'ny tenantsika anio dia ny hoe tena mahasoa tokoa amin'ireo asa vaovao angatahinay amin'ny Apple Watch ve ity fiasa vaovao ity raha tsy mamoaka modely fiambenana vaovao handrosoana amin'ny fivelarana fotsiny, ary mazava ho azy, mampitombo ny varotra. Ho hitantsika noho izany ny tombony sy fatiantoka an'ny Apple Watch, tsy miankina amin'ny iPhone.
Mbola mahita zavatra maro hafa koa isika tombony inona ny tsy fanelingelenana, raha mbola te hanararaotra azy ianao. Voalohany, ho 100% ny famantaranandronao, na dia tsy miala ao an-trano amin'ny iPhone aza ianao. Marina fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy olana ny fakana finday ivelan'ny trano ankehitriny. Fa amin'ny tranga sasany, tombony ny tsy anaovanao akanjo. Aiza no hahamarihantsika azy indrindra dia ny fanaovana fanatanjahan-tena. Hatramin'izao, ary hatramin'ny nahatongavan'ny andiany 2, dia tsy fanakantsakanana izany, satria manana GPS izy, fa Apple Watch miaraka amin'ny LTE dia ahafahantsika mihaino ny lisitry ny hira ananantsika ao amin'ny Apple Music, Spotify na serivisy mozika hafa.
Amin'ny lafiny iray, azo atao ny mandray hafatra sy mailaka, na tsy entinao aza ny telefaona. Raha ny momba ny antso dia tsy manana angona izahay fa toa tsy ho afaka handray antso ianao na dia ho hita eo aza raha azo atao amin'ny alàlan'ny Facetime na Skype izany.
Saingy araka ny efa nolazainay, izahay koa te-hahita ny drawbacks. Ny fifandraisana amin'ireo tambajotra finday dia midika hoe mihinana bateria avo kokoa. Satria ny Apple Watch dia tsy vokatra manana fizakan-tena lehibe ankehitriny, mieritreritra izahay fa miasa amin'ny rafitra fiasa miaraka amin'ny fanjifana ambany ny Apple. Ny safidy dia famantaranandro lehibe kokoa noho ny maodely ankehitriny.
Etsy ankilany, midika izany manana taham-data fanampiny, toy ilay atolotry ny mpandraharaha ho an'ny iPad ankehitriny. Amin'izao fotoana izao dia nidina be ireo sanda ireo, ary tafiditra ao anaty fonosana telefaona sasany aza.
Ny fehiny dia maneho ny fiovana lehibe ho an'ny mpampiasa maro, ary koa ny andrasana. Mifanohitra amin'izany, tsy ny mpampiasa rehetra no mila famantaranandro mifandray. Noho izany, ho hitantsika mialoha ireo maodely misy LTE na tsy misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Tombony sy fatiantoka an'ny Apple Watch miaraka amin'ny LTE
iTunes U, ny fangatahana fiofanana dia avy amin'ny iTunes.
Browser ho an'ny Mac